Joyina umphakathi we-Paxful
Ingabe singaba abangane?
Masixhumane enkundleni yokuxhumana futhi sizokutshela ngakho konke okwenzeka e-Paxful nasezweni lemali eyidijithali. Nakhu lapho ozothola khona ama-akhawunti ethu asemthethweni ezinkundla zokuxhumana—futhi sizothuthukisa leli khasi nganoma yikuphi okusha esikwenezelayo.
Xhumana ne-akhawunti engezansi, noma nawo wonke!
Sisungule amashaneli aqondile e-Telegram ezwe ngalinye esisebenza kulo. Sijoyine ku-Telegram ukuze uxoxe nathi mayelana nemibono yakho ye-Paxful kanye nabanye abathanda imali eyidijithali emphakathini wangakini.
Ingabe ufuna ukwazi okwakamuva mayela nokuqukethwe ku-Paxful kanye nokwenzeka kwezemali eyidijithali? Ama-webinars ethu ayindawo ongathola kuyo amagugu olwazi ongawahlola.